I-Bangladesh eVisa | KwiVisa kwi-Intanethi e-Bangladesh | natvisa.com
Isicelo se-Visa sase-Bangladesh kwi-Intanethi
Ilizwe langaphandle elifuna ukufumana i-visa yokuya e-Bangladesh inokufaka isicelo kwi-Intanethi ukuba bafuna: i-visa entsha, ulwandiso lwe-visa, akukho visa efunekayo (NVR), okanye i-visa yokufika (i-OAV). Kwisicelo se-visa kwi-Intanethi ye-Bangladesh, uhlobo ngalunye lwe-visa luyahluka ngokwenjongo yokutyelelo, ubude bendawo yokuhlala, kunye nolungiselelo lwababini nelizwe lesizwe langaphandle. Kusegunyeni ukubeka udidi lwe-visa kunye nexesha lokuhlala elizweni. Xa isicelo sivunyiwe, umenzi-sicelo uya kuthunyelwa kwi-eVisa kwifom ye-imeyile nge-imeyile.
Iintlobo ngeentlobo zeVietnam Visa
I-Visa eyodwa yokuNgena Ukutyelelwa koonozakuzaku - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-60 Zodwa, Zimbini okanye Zimbini Faka isicelo ngoku
I-Visa eyodwa yokuNgena
Isicelo sifunyenwe, siya kuphononongwa kwaye singeniswe.
Ndwendwela kwindlu yozakuzo
Yiya kwindlu yozakuzo ekufuphi okanye kwiziko elimele ukuba unolwazi malunga nesicelo.
Nje ukuba i-visa ifunyenwe, gcina ngokukhuselekileyo ngamaxwebhu okuhamba.
Abantu abanomdla wokufumana i-visa yokuya e-Bangladesh kufuneka kuqala kunye nepaspoti evumelekileyo. Ipasipoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 kwaye iya kufuna amaphepha ama-2 angenanto yokufaka isitampu.
Ukuze ungenise i-eVisa yakho yase-Bangladesh, uya kudinga ezi zinto zilandelayo ziluncedo.
Ifoto yedijithali yakho
Idilesi yemeyile eKhona
Ndwendwela I-Ambassia ekufutshane ye-Bangladesh
Emva kokuba isicelo se-Bangladesh eVisa singeniswe ngempumelelo kwi-intanethi, isicelo siyakufuneka siprintwe kwaye sisiwe kwi-ofisi ekufutshane ye-visa. Ukudibana kuya kufuneka kwenziwe ngaphambi kokuya kwindlu yozakuzo.
Idilesi ye-imeyile evumelekileyo iya kufuneka ukuze kufunyenwe isicelo se-visa se-Bangladesh.
Iinkcukacha ze-Bangladesh Visa
Yintoni i-eVisa kwaye Yintoni ekufuneka uyazi?
Ukuba wenza izicwangciso zokutyelela e-Bangladesh, into yokuqala ekufuneka beyenzile abasemagunyeni kukuba ubabonise i-visa yakho ukuya kwilizwe. Ke ngoko, kubalulekile ukuqonda ukubaluleka kwe-visa kubahambi abaceba ukutyelela ilizwe langaphandle njenge-Bangladesh. Ukufumana i-visa yakho yesiqhelo yinkqubo ende edinayo ebandakanya ukulinda emgceni omde. Ngokwaziswa kwe-eVisa, ukufumana olu xwebhu lubaluleke kakhulu kuye kwaba lula kwaye kungabinangxaki.
Umahluko mkhulu phakathi kweVisa yesiqhelo kunye ne-eVisa. Ukufumana i-visa eqhelekileyo ongene kuyo ukuze ulungiselele idinga lokuya ku-embassy. Nje ukuba ufumane idinga, uya kutyelela iofisi kunye namaxwebhu akho. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukufumana ixabiso eliqhelekileyo le-visa kungaphezulu kakhulu kune-eVisa yakho.
I-Visa ye-elektroniki okanye i-eVisa yivisa onokuthi ufake isicelo kuyo kwi-Intanethi. Ifom yesicelo ifumaneka ngokulula kuyo nayiphi na iwebhusayithi karhulumente. Konke okufuneka ukwenze kukukhuphela kunye nokuzalisa le fomu.
Ungayifumana njani iVisa yokuya kwi-Bangladesh Online
Ukufumana i-visa yokuya kwi-intanethi kwi-Intanethi kufuna amanyathelo amathathu alula. Bazi:
Gcwalisa isicelo se-Intanethi: Inyathelo lokuqala lokufaka isicelo se-eVisa yakho e-Bangladesh kukugcwalisa iphetshana lesicelo kwi-Intanethi. Ungayifumana le fomu yokufaka isicelo kuyo nayiphi na iwebhusayithi karhulumente.
Shicilela ifomu yesicelo: Nje ukuba abenzi-zicelo bazalise ifomu, kufuneka bafumane ukuprintwa, kwifom yabo yokwenza isicelo.
Ndwendwela iOfisi yeVisa ekufutshane: Thatha ifomu yakho yokuzalisa isicelo egcwele kunye nawo onke amaxwebhu ayimfuneko kwi-ofisi yaseVisa ekufutshane. Apho kufuneka ungenise ifomu kunye namaxwebhu kwaye uhlawule umrhumo we-visa.
Imiyalelo ebalulekileyo yabaTyeleli Ukufaka isicelo kwi-eVisa yase-Bangladesh
Iindwendwe ezininzi zenza isicelo se-eVisa yokhetho lwabo emazweni minyaka le. Kwilizwe ngalinye, imigaqo kunye nemigaqo yahlukile kwaye yahlukile. Ke, umntu kufuneka alumke kakhulu kwaye alandele imiyalelo abanikwe yona. Abahambi abafaka izicelo kwi-Bangladesh eVisa nabo kufuneka balandele imiyalelo ethile.
Abafaki-zicelo kufuneka bachaze eyona njongo yokutyelelwa kwabo ilizwe, ngokucacileyo. Abantu bahlala bethanda ukufumana i-visa ephosakeleyo ngelixa iinjongo zabo zokutyelela ilizwe zisenokwahluka ngokupheleleyo. Oku kunokubangela ingxaki enkulu yezomthetho. Ukuthintela iimeko ezinje, qiniseka ukuba ngokucacileyo ukhankanya esona sizathu sokuba undwendwele iBangladeshi.
Ukufumana iVisa yabakhenkethi ikuvumela ukuba uhambe kwilizwe, tyelela abahlobo bakho kunye nosapho abahlala kwilizwe, ukuzonwabisa, ukuchitha ixesha lobuqu, iholide kunye nemidlalo, njl njl. ivisa.
Xa ufaka isicelo se-Visa, qiniseka ukuba lonke ulwazi olinikelelayo luyinyani. Ukunika ulwazi olungalunganga okanye iinkcukacha ngelixa ugcwalisa i-visa yakho kunokubangela ingxaki enkulu kwaye kwiimeko ezigqithisileyo, umntu unokuphela emva kwemivalo. Ke ngoko qiniseka ukuba ulwazi olunika lona luyinyaniso kwaye luqinisekisiwe.
Amaxwebhu ayimfuneko kunye nendlela yokuPhucula ukuVunywa kwakho
Ukufumana i-eVisa konke malunga nokubonelela ngamaxwebhu afanelekileyo kunye nokwenza intlawulo ibe yimpumelelo. Nje ukuba wenze loo nto, ungayifumana iVV yakho ingekabikho xesha. Ukusilela ukubonelela ngamaxwebhu kuzisa amathuba akho okufumana i-visa kwilizwe lakho olifunayo. Nanga amanye amaxwebhu ekufuneka umntu awabonelele ukuba afumane i-eVisa eya e-Bangladesh.
Elinye lawona maxwebhu abalulekileyo ekufuneka uwakhuphe kunye nepasipoti efanelekileyo. Ipasipoti kufuneka ibe isemthethweni kangangesithuba seenyanga ezi-6. Isebenzayo kwiimeko ezilandelayo-abanini beSatifikethi / abapasileyo abakhutshwa liZizwe eziManyeneyo. Iiarhente ezikhethekileyo kunye nesiQinisekiso esiDlulayo soThintelo / iNullies / incwadi yomkhosi weSaman xa usiya elizweni usemsebenzini uxolelwe kulo mthetho.
Ifom yesicelo kunye neFoto
Amaxwebhu ekufuneka uwabonelele ngokufumana i-eVisa eya e-Bangladesh ngala; ikopi yefom yesicelo se-Visa, ezaliswe ngokufanelekileyo ngolwazi oluchanekileyo, iikopi zefoto lomfaki-sicelo kunye nobungqina bokuthi intlawulo ye-visa ihlawulwe.
Uhambo lokuHamba & Ubungqina bendawo yokuhlala
Abahambi kufuneka banike uhambo lwabo olubandakanya ukuhamba kwabo kunye nethikithi lokubuya. Abahambi bekwayacelwa ukuba babonelele ubungqina bendawo ababehlala kuyo equka ukubhukisha ihotele okanye ileta yesimemo kunye nobungqina bendawo yokuhlala esemthethweni enje ngephepha-mvume lokuqhuba, ibill yokusebenzisa okanye isazisi sikarhulumente.
Abafaki-zicelo kufuneka banikeze ubungqina besiteyitimenti sabo semali. Kuya kufuneka babenamakhadi e-Debit esebenzayo, iKhadi letyala okanye i-akhawunti yePayPal. Isiteyitimenti sabo sasebhankini kufuneka sibenesixa esincinci se-USD 500, okanye kufuneka babe banemali efanayo. Abo bahamba ngokusebenza kukarhulumente bakhululwa kulo mthetho.
Phambi kokuba uye eBanglikana, umntu kufuneka afumane isitofu sokugonyelwa i-Yellow Fever ukuba ukwindawo echaphazelekayo yeHever Fever. Umhambi kufuneka abonise ubungqina bokugonywa.
Ukongeza ekuboneleleni onke amaxwebhu ngokuchanekileyo, kukho izinto ezithile ekufuneka umntu azinyamekele ngelixa usenza isicelo se-eVisa. Oku kuya kuphucula amathuba abo okufumana i-visa. Elinye lamanqaku abalulekileyo lelokuba umntu lowo makangathatyathwa njengoyingozi kwilizwe. Mabangabinayo nayiphi na ingxelo eqhubekayo yamapolisa ichaza okufanayo. Nje ukuba abahambi babe nendawo kwezi ndawo, kuya kuvunywa ngokulula visa.
Ndingazalisa isicelo sam se-visa ngolunye ulwimi ngaphandle kwesiNgesi?
Hayi, ngekhe ugcwalise isicelo ngolunye ulwimi. Ngokwangoku, zonke izicelo zingagcwaliswa kulwimi lwesiNgesi. Inkqubo yethu ixhasa kuphela uLwimi lwesiNgesi; ke, ukuba ucela umngeni ngokuzalisa iifom, fumana umntu onokukunceda ukuze ugcwalise iifom.
Ngaba ndiya kuba nakho ukufikelela kwinkqubo yesicelo se-intanethi ndisebenzisa ikhompyuter yam?
Ewe Unga. Nangona sisazama ukuqiniseka ukuba iwebhusayithi yethu isebenza ngayo yonke ibrawuza ye-intanethi kunye nenkqubo yokusebenza, sicebisa ukuba usebenzise umkhangeli zincwadi wamva kunye noseto kwisicelo sakho ukunqanda iingxaki. Iwebhusayithi yethu isenokungasebenzi kwiibrows zakudala ze-intanethi, kwaye oku kunokuchaphazela isicelo sakho. Sebenzisa iGoogle Chrome okanye ibrowser yeMozilla Firefox yakutshanje yesicelo sakho.
Ndingasigcina isicelo sam esiphakathi sangaphakathi ngenkqubo yesicelo?
Ewe. Ungashiya isicelo sakho kwaye ubuye ukuze uqhubeke xa ufuna. Kukho ukhetho lokonga nokuPhuma ekuvumela ukuba ushiye iphepha lesicelo kwaye ubuye kamva ukuze uqhubeke. Ukuqhubeka nesicelo sakho, ungafaka "i-Visa application ID yakho," kwaye iyakutsala isicelo sakho ukuze uqhubeke. Kodwa kuya kufuneka ugcwalise isicelo sakho ngeentsuku ezisixhenxe (7), kungenjalo uya kucinywa.
Ndenze impazamo kwenye yeempendulo zam. Ndingayitshintsha?
Ewe, unokutshintsha iimpendulo kuwo nawuphi na umbuzo lo gama nje ungasingenisanga isicelo sokulungiswa kokugqibela. Ukuba ungenise isicelo, ekugqibeleni, ngekhe wenze iinguqu nakweyiphi na impendulo oyifakileyo ngaphambili. Ke, xa ugcwalisa iimpendulo zakho, qiniseka ukuba ujonga kwakhona iimpazamo kunye nokuchaneka.
Andifumenanga i-imeyile yam yokuqinisekiswa kwesicelo. Ngaba ingathunyelwa kwakhona?
Nje ukuba ungenise isicelo sakho se-Visa, uya kuthumela ngokuzenzekelayo i-imeyile eqinisekisa ukuba sifumene isicelo. Ukuba awuyifumani, jonga ibhokisi yakho ye-SPAM okanye uvuselele i-imeyile yakho. Ukuba, emva kweeyure ezingama-24, i-imeyile ayiziswa, nxibelelana nenkxaso yabathengi ukufumana ukuba kutheni.
Andikwazi ukufumana kwakhona isicelo sam. Ndingenza ntoni?
Oku kwenzeka kakhulu ngenxa yokuba ushiye iphepha lesicelo ngaphandle kokuligcina okanye ngenxa yokuba ushiye iphepha lesicelo, waligcina, kodwa alibuyanga ukulenza ngaphakathi kwiintsuku ezisixhenxe (7). Ukuba oku kuyenzeka kuwe, kuya kufuneka uqalise isicelo sakho kwakhona kwaye uqiniseke ukuba usigcina sonke inqanaba lendlela.
Ndingayitshintsha indawo yam yokuqeshwa?
Ungahlela kuphela indawo otyunjelwe kuyo xa isicelo sisahleli. Nje ukuba ungenise isicelo sokugqibela, awuyi kuba nakho ukuhlela okanye ukwenza naluphi na utshintsho olulandelayo. Kungenxa yoko le nto kucetyiswe ukuba uqinisekile ngalo lonke ulwazi oluzalisa isicelo sakho kwaye uqiniseke ukuba awenzi zimpazamo.
Hayi, yonke intlawulo ehlawulelwe i-visa yakho yase-Bangladesh ayibuyiselwa. Imirhumo ihlawulelwa ukuqhubekisela i-visa, kwaye akukho tyala xa umenzi-sicelo efumana imbuyiselo yoko ebehlawulile. Nje ukuba wenze intlawulo, i-visa yakho iya kwenziwa, kwaye kuya kufuneka ulinde isigqibo seVisa.
Ndingasibhatala isicelo sam se-visa kwi-intanethi?
Ewe, unokuhlawula isicelo sakho se-visa kwi-intanethi. Into oyifunayo likhadi lakho letyala okanye ikhadi lebhanki elinikwe intlawulo kwi-Intanethi. Imali elingana yokufaka isicelo se-visa iya kutsalwa kwikhadi lakho, kwaye ukulungiswa kwe-visa yakho kuya kuqala. Qaphela ukuba i-visa yakho ayizukuqhutshwa ngaphandle kokuba wenze intlawulo.
Umhla endingenileyo ngawo awamkelwa. Yeyiphi ifomathi efanelekileyo?
Ifomathi yomhla eyamkelweyo yi-dd / mm / yyyy, oko kukuthi, umhla uza kuqala, ulandelwe yinyanga kunye nonyaka. Ukuzama ukufaka umhla usebenzisa enye ifomathi ngeke kusebenze; ke, kuya kufuneka uqaphele oku xa uzalisa ifom yesicelo. Jonga ifomathi yomhla ngaphambi kokuba ufake umhla.